ချင်းတွင်းအထက်သို့ ဆန်တက်ခြင်း …. (၂) ကနီ - ကင်းရွာ - Calm Hill
ချင်းတွင်းအထက်သို့ ဆန်တက်ခြင်း …. (၂) ကနီ - ကင်းရွာ
ကနီမှာညမအိပ်ဖြစ်တော့တာနဲ့ နေ့လည် ၁ နာရီလောက်မှာ ကနီရုံးကမော်တော်ကို ယူပြီးချင်းတွင်းအထက်ကို ဆန်တက်ပါတယ်။ ကနီရုံးကနေ မှန်ပြောင်းတစ်လက်ကို တောင်းယူလာခဲ့လို့ တစ်လမ်းလုံး မော်တော်ပေါ်ကနေ မှန်ပြောင်းတစ်လက်နဲ့ ဟိုကြည့်သည်ကြည့်ပေါ့။ မြစ်ကမ်းဘေးဝဲယာတစ်လျောက်လုံး တောတွေတောင်တွေ ကြည့်ပါပဲ။ မြစ်လည်သောင်တွေ ပေါ်မှာနားနေကြတဲ့ ငှက်မျိုးစုံလည်း တွေ့ရပါတယ်။ တစ်ချို့ငှက်တွေကို နာမည်တောင်မခေါ်တတ်ပါဘူး မမြင်ဖူးလို့လေ။ မမြင်ဖူးတဲ့ငှက်ကို မြင်လိုက်ဘာခေါ်လဲရုံးက ပါလာတဲ့လူတွေကိုမေးလိုက်နဲ့ ခရီးထွက်လာလိုက်တာပေါ့။ အဲ့သည်တော့မှ ဟင်္သာဆိုတာကို ကောင်းကောင်းမှတ်မိတော့တယ်။ စာအုပ်တွေ ပုံတွေထဲကလိုမဟုတ်ဘူးပဲ လှလဲမလှဘူး ကြေးနီရောင်ပေါက်နေတဲ့ ဘဲပုံစံငှက်ပဲ။ ဆောင်းတွင်းကြီးလည်း ဖြစ်ပြန် မြစ်ထဲမှာလည်းဖြစ်နေတော့ ညနေစောင်းလာလေလေ လေတိုးတာတွေက ပိုပိုအေးလာတာပဲ။
ညနေပိုင်းမှောင်စပျိုးချိန် ၅ နာရီခွဲ ၆ နာရီလောက်ရောက်တော့ ကင်းဆိုတဲ့ရွာကလေးကို ရောက်ပါတယ်။ ကင်းဆိုတဲ့အတိုင်း ကင်းစခန်းလေးပါ။ ရှေးကတည်းက မြစ်ကြောင်းစောင့်ဖို့ဖွင့်ထားတဲ့ ကင်းစခန်းပါ။ အဲ့သည့် ကင်းရွာက စခန်းမှာပဲညအိပ်စခန်းချပါတယ်။ ကင်းရွာစခန်းက အဖေ့တပည့်ရဲ့ကောင်းမှုနဲ့ ညစာတော့ ကောင်းကောင်းစာလိုက်ရပါတယ်။ ညပိုင်းမှာ အဖေကတော့ သူ့တပည့်နဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေစစ် မေးစရာရှိတာတွေမေးနေလို့ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းပဲ အစောကြီးဝင်အိပ်ပါတယ်။ အဲ့သည်တော့မှ လှေမူးတယ်ဆိုတာ ဘာလဲသိတော့တယ် အိပ်ယာပေါ် ပက်လက်လှန်မျက်လုံးမှိတ်လိုက်တာနဲ့ ခုတင်ကြီးလှေလို ဘယ်ညာလူးနေသလို ခံစားရပါတယ်။ ဘယ်လိုမှ အိပ်လို့မရတော့ပဲမူးလာပြီး နောက်ဆုံးအပြင်ထွက် အန်ရပါတော့တယ်။ အဖေကယ်ပါ အမေကယ်ပါနဲ့ နောက်ဆုံးဓာတ်ကြမ်းရိုက်ဆိုပြီး အဖေကအရက်သောက်ဆိုပြီးတိုက်လိုက်မှ အမူးကအမူးနဲ့ကြေသွားသလား ပိုမူးပြီးပဲအိပ်သွားသလားတော့ မသိဘူး အိပ်တော့ ပျော်သွားတာပါပဲ။
ကင်းရွာကနေ မနက်အစောခရီးထွက်မယ်ဆိုလို့ မနက် ၅ နာရီလောက်ကတည်းက ထပြီးပြင်ဆင်ရပါတယ်။ ၆ နာရီလောက်ရောက်တော့ တော်တော်လေးလင်းနေပါပြီ ဒီတော့စထွက်မယ်လို့ဆိုတော့ ကင်းရွာကလူက သူလည်းလိုက်မယ် ကနီကစက်လှေကသေးလို့ ပြန်လွတ်လိုက်တော့ ကင်းကစက်လှေအကြီးပဲယူခဲ့မယ် ဒါပေမယ့် မနက် ၉ နာရီကျော်မှ ထွက်မှရမယ်ဆရာလို့ အဖေ့ကိုပြောပါတယ်။ အခုထွက်လည်း ရ နာရီနဲ့ ၈ နာရီကြားနေထွက်ရင် မြစ်ထဲမြူတွေထလာရင် ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားလို့မရဘူး ဘာမှမမြင်ရဘူး မြစ်ထဲမှစက်လှေရပ်နေရရင် ပိုဆိုးတယ် ဒါကြောင့် ၉ နာရီမှပဲထွက်ကြရင် ကောင်းမယ်ဆိုပြီး အကြံပေးပါတယ်။ ဒါနဲ့မနက်ခင်း အေးအေးဆေးဆေး မြစ်ကမ်းပါးဘေးက ကင်းစခန်းမှာပဲ သောင်တင်နေပါတယ်။ ရ နာရီလောက်ကစပြီး နေထွက်တယ်ဆိုရင်ပဲ မြစ်ထဲက ရေခိုးတွေကြောင့် မြူတွေထလာလိုက်တာ ၁ဝ ပေအကွာလောက်ဆိုရင် ဘာမှမမြင်ရ လောက်အောင်ကို ဆိုးပါတယ်။ ၈ နာရီခွဲ ၉ နာရီလောက်မှ မြူကွဲပါတယ်။ တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် ဒီလောက် မြူဆိုင်းတာ ဒါပထမဆုံး မြင်ဖူးတာပါပဲ။